Baalayaal - Delta Engineering Belgium
Kaydso qeybta "Baarayaasha"
Saxan kartoon hore
Mashiinka si aad isugu laabto oo aad si toos ah ugu dhejisid baakadaha kartoonka (120 saxan / saacad). Saxanno ilaa 1200 x 1200 mm (47 ″ x 47 ″).
Published in Baarayaasha
Aad u jajaban, bakeeriga nus-otomaatigga ah oo geyn kara dhalooyin badan oo faaruq ah (nus) baakidh, gogosha fidsan, hoosta hoosteeda, ama aan lahayn baakidh (konteenaro la xajin karo).
Miiska keydka: 1200 mm dheer - ilaa 1200 mm ballaaran.
Wuu sameyn karaa fallaadho dhererkiisu yahay nus dherer ah ilaa 1,6 m.
Miiska keydka: 1200mm dherer - ilaa 1400mm ballaaran.
Dhalooyinka madhan ee miisaska wax lagu rito oo ay weheliso bakhaarro waaweyn oo iskuxiran
Palletizer si otomaatig ah u leh bakhaarro isku dhafan oo lagu rakibo dhalooyin madhan oo ku jira baakado
Qeybtu waxay sameyn kartaa baalleyaal dherer buuxa leh ilaa 3.1 m sare. Iyada oo adeegaha saliida leh. Waxa kale oo uu xamili karaa 2 saxan oo nus nuskeed ah.
Thursday, April 23 2020 by Cristina Maria Sunea
Qalabeeyayaasha si buuxda oo otomaatig ah oo leh bakhaar iskuxiran oo taraafik leh
Dhalooyinka qashin-qarshka leh ee otomaatiga ah oo leh mataano isku-dhafan oo isku-dhafan oo iskuxiran badeecado madhan oo ku yaal saxanka iyo hoodhka.
Cutubka wuxuu sameyn karaa xirmooyin dherer buuxa illaa 3.1 m sare.
Dhalooyinka qashin-qarshka leh ee otomaatiga ah oo ay weheliyaan bakhaarro wax lagu kariyo oo taraafik ah oo lagu buuxiyo alaabada madhan ee ku jirta saxanka, go'yaasha iyo go'yaalba.
Khamiista, Luulyo 14, 2016 by Cristina Maria Sunea
Palletizer si buuxda oomaali u ah weel wax lagu keydin karo / durbaanno - nooc is haysta
Palletizer buuxda oo otomaatig ah oo loogu talagalay weelasha iskudhafan ee 5 ilaa 60 L. Sida caadiga ah loo isticmaalo durbaanada 20-30L. Waxay samayn kartaa sariirro dhererkoodu yahay 3.1 m (7 lakab oo ah 25L durbaanno), iyadoo la yareynayo kharashka gaadiidka! Asal ahaan waa nooc iswaafajinaya oo ah DP300, iyada oo aan gawaarida gawaarida gawaarida la marin.
Palletizer si buuxda otomaatig ah ugu shaqeeya weelal / durbaanno is dulsaaran
Palletizer buuxda oo otomaatig ah oo loogu talagalay weelasha wax lagu kaydin karo ee ah 2 ilaa 60 L. Caadi ahaan loo isticmaalo durbaannada 20-30L. Waxay samayn kartaa sariirro dhererkoodu yahay 3.1 m (7 lakab oo ah 25L durbaanno), iyagoo yareynaya kharashka gaadiidka!
Isniin, 20 Sebtember 2021 by Sara
Unugyada is -dulsaarka ee bacaha / baakooyinka
Palletizer bac oo si otomaatig ah u ah ugu badnaan. 80 kiish saacaddii. Wuxuu ku ururin karaa ilaa 3 sariir oo ku yaal bakhaarka.
Palletizer xaashi toosan oo toos ah
Palletizer si buuxda otomaatig u ah si aad ugu xirxirto dhalooyin madhan oo ku yaal go'yaal fidsan Wuu sameyn karaa sariirado dherer buuxa (illaa 3.1 m). Waxaa lagu qalabeyn karaa 4 qaybood oo kala duwan oo palletizing ah.